ल्यापटप ब्यागको विक्री २५ प्रतिशतले बढयो | गृहपृष्ठ
Home बजार ल्यापटप ब्यागको विक्री २५ प्रतिशतले बढयो
ल्यापटप ब्यागको विक्री २५ प्रतिशतले बढयो
असार २९, काठमाडौं (अस)। ल्यापटपको बढ्दो प्रयोगसँगै ल्यापटप ब्यागको व्यवसायमा पनि वृद्धि भएको छ । ल्यापटपलाई सुरक्षितका साथ बोकेर हिँड्न यस्तो ब्यागको प्रयोग गरिन्छ । ल्यापटप प्रयोगकर्ताहरूका लागि ल्यापटप ब्याग अनिवार्य भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘ल्यापटप ब्यागको व्यापार अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा २५ प्रतिशतले बढेको छ,’ खिचापोखरीस्थित एएस स्टोरका विक्रेता दीपराज आलेले भने । ल्यापटप प्रयोगकर्ताको बढ्दो सङ्ख्यासँगै ल्यापटप ब्यागको व्यवसाय पनि बढेको उनको धारणा छ ।
एएस स्टोरबाट दैनिक करीब सातओटा ल्यापटप ब्याग विक्री हुने गरेको छ । हाड कभर भएकाले ल्यापटपको सुरक्षाका लागि यस्तो ब्यागको प्रयोग बढेको विक्रेता आलेले बताए । यहाँ स्विजगियर, एओकिङ, क्यामेल माउण्टेनलगायत ब्राण्डका ल्यापटप ब्याग उपलब्ध रहेका छन् । यस्ता ल्यापटप ब्यागको मूल्य १ हजार ५० देखि २ हजार ६ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने उनले जानकारी दिए ।
आजभोलि कार्यालय जाने कर्मचारी तथा कलेजका अधिकांश विद्यार्थीले ल्यापटप ब्याग बोकेर हिँडेको देखिन्छ । बाटोमा हिँड्दा ठोक्किने तथा भुँइमा खस्ने सम्भावना हुने हुँदा ल्यापटप ब्याग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुन्धारास्थित एसएस शुज सेण्टरकी सञ्चालक भगवती अग्रवालको भनाइ छ । ल्यापटपलाई ‘ल्यापटप ब्याग’मा राखेपछि ती सबै खतराबाट सुरक्षित हुने हुँदा यसको प्रयोग बढेको उनले बताइन् ।
एसएसमा एचपी, क्यामेल, पिको, एडिडासलगायत ब्राण्डका ल्यापटप ब्याग उपलब्ध छन् । ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने यस्ता ब्याग विभिन्न साइज तथा डिजाइनमा उपलब्ध रहेका छन् । सञ्चालक अग्रवालका अनुसार एसएसबाट दैनिक ४ देखि ६ ओटासम्म ल्यापटप ब्याग विक्री हुन्छ ।
खिचापोखरीस्थित राजमती ब्याग कलेक्सनमा पनि यस वर्षल्यापटप ब्यागको विक्री बढेको छ । ‘धेरैजसो विद्यार्थीहरूले ल्यापटपलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि यस्ता ब्यागको व्यापार बढेको हो,’ राजमतीकी सञ्चालक कृष्णदेवी डङ्गोलले बताइन् । यहाँबाट दैनिक ८ ओटासम्म ल्यापटप ब्याग विक्री हुने गरेको छ । ८ सय ५० देखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पर्ने यस्ता ब्याग सुरक्षा र आकर्षणको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट रहेको उनको दाबी छ । ब्याक साइड, वान साइड तथा नर्मल फिटलगायत डिजाइनका ल्यापटप ब्याग विभिन्न रङमा उपलब्ध रहेका छन् ।
नागरिक राहत कोषको रकम हस्तान्तरण
नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा मह सञ्चारको संयुक्त प्रयासबाट स्थापना भएको नागरिक राहत कोषले बाढी पीडितका लागि घर निर्माण गर्न हाबिट फर ⋲युमानिटिज इण्टरनेशनललाई रू. ३ लाख प्रदान गरेको छ । बुधवार आयोजित एक कार्यक्रमबीच कोषका संयोजकद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचर्यले इण्टरनेशनलका राष्ट्रिय निर्देशक अरुणा पाउललाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विनोद चौधरीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
गतवर्ष कैलालीमा आएको बाढीबाट घरबार गुमाएकाहरूका लागि राहत कोषको सहयोगमा ह्युमानिटिज इण्टरनेशनलले घर बनाई पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । त्यस्तै, झापा, मोरङ, इलाम, सुनसरी, दाङ, टीकापुर, सुर्खेत, काभ्रेलगायत स्थानमा पनि घर बनिरहेको कोषका सञ्चालकद्वयले जानकारी दिए ।
विश्वका ९० राष्ट्रमा काम गर्दै आएको ह्युमानिटिज इण्टरनेशनलले कम मूल्यका घर बनाएर घरबार विहीनलाई वितरण गर्दै आएको छ । विषेश प्रकारले निर्मलीकृत बाँसबाट बनाइने यस्ता घरहरूको आयु कम्तीमा ३५ वर्षको रहन्छ ।
उक्त अवसरमा ह्युमानिटिज इण्टरनेशनलका राष्ट्रिय निर्देशक पाउलले रू. २ हजार ५ सयमात्र सहयोग गरिएमा एक परिवारलाई स्थायी घर निर्माण गर्न सक्ने बताउँदै उक्त सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरे । त्यस्तै, कलाकार तथा कोषका संयोजद्वयले घरबार विहीन भएकालाई अत्यन्त न्यून रकममा घर बनाइदिने उक्त गैरसरकारी संस्थालाई धन्यवाद दिँदै पुन: सहयोगका लागि अनुरोध गरे । कार्यक्रममा बोल्दै परिसङ्घका अध्यक्ष चौधरीले रू. २ हजार ५ सयको सहयोगमै कसैले स्थायी घर पाउँछ भने सहयोग गर्न हिच्किचाउन नहुने बताए ।
डाबर स्पेशल तीज महोत्सव साउन १२ देखि
‘डाबर स्पेशल तीज महोत्सव २०६८’ आगामी साउन १२ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । डाइरेक्सन नेपालको सहयोग तथा डाबर स्पेशल हेयर आयलको प्रायोजनमा महिला सृजनशील केन्द्रले सो महोत्सव आयोजना गर्ने भएको हो । उक्त महोत्सवमा हस्तकला, सारी तथा कुर्था, गिफ्ट सामग्री, गरगहना, मेहेन्दी, मोबाइल, होम अप्लाइन्सेस् तथा अन्य तीजसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको १ सयभन्दा बढी स्टल राखिने आयोजकले बताएको छ । साथै, १० ओटा खानाको स्टल पनि राखिने जानकारी दिइएको छ । यहाँ आउने दर्शकले तीजका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री एकै छानामुनि खरीद गर्न सक्ने बताइएको छ ।
महिलाहरूको महान् पर्व तीज मनाउन महिला सृजनशील केन्द्रले डाइरेक्सन नेपालको सहयोगमा विसं. २०५९ सालदेखि वार्षिक रूपमा तीज महोत्सव सञ्चालन गर्दै आएको छ । महोत्सवको १० औं वर्षको अवसरमा स्पेशल तीज फेशन शो पनि गरिने आयोजकले बताएको छ । मेलाको अन्तिम दिन युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेण्टरको प्राङ्गणमा हुने उक्त फेशन शोमा नेपालका विभिन्न कलाकर्मीहरूको समेत उपस्थिति रहने बताइएको छ । उक्त महोत्सवबाट उठेको रकमको २० प्रतिशत महिलावर्गको उत्थानका लागि खर्च गरिने आयोजकले बताएको छ । मेलालाई एलजी इलेक्ट्रोनिक्स, मनकामना केबलकार, एनसीसी बैङ्क, युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर, क्यापिटल एफएम, सुविसु केवल नेट,ईसीएस मिडिया, डीईसीसी, चैतन्यलगायतले पनि सहयोग गर्ने भएका छन् ।
कमर्ज एण्ड ट्रष्ट र पीडब्ल्यूसीबीच सम्झौता
कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैङ्क नेपाल लिमिटेड र भारतको प्राइसवाटरहाउसकुपस प्रालिबीच ‘बिजनेश प्रोसेश म्यानेजमेण्ट सोलुशन’सम्बन्धी सफ्टवेयर विकास गर्न एक सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार बैङ्कले पीडब्ल्यूसीसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक प्रक्रिया व्यवस्थापनका समाधानहरूसम्बन्धी सफ्टवेयरको विकास गर्नेछ । बुधवार भएको उक्त सम्झौतामा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई र पीडब्ल्यूसीका तर्फबाट प्रदीप भोवमिकले हस्ताक्षर गरे । बैङ्कले कागजरहित वातावरणमा काम गर्ने रणनीतिअनुसार उक्त सफ्टवेयर विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने भएको हो । उक्त सफ्टवेयरको प्रयोगपश्चात कम खर्चमा छिटो तथा सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने बैङ्कले बताएको छ । बिजनेश कन्सल्टिङ प्रोभाइडरका रूपमा काम गर्दै आएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी पीडब्ल्यूसी संस्थाहरूमा ‘चेञ्ज म्यानेजमेण्ट’ र ‘आईटी’सम्बन्धी एकीकरणका लागि संसारभर प्रख्यात छ ।
गुराँस लाइफको बीमा रकम भुक्तानी
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जीवन बीमा दाबीबापतको रकम भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले गत जेठ २९ गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएका विशाल खरेल र ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु भएका अनिल शर्माको जीवन बीमाबापतको रकम भुक्तानी गरेको हो । कम्पनीले खरेलका पिता भोलानाथ खरेललाई १ लाख ९० हजार ५ सय ७१ र शर्माका पिता सुशील शर्मालाई रू. २ लाख ८५ हजार ८ सय ८३ बराबरको रकम भुक्तानी गरेको हो । उनीहरूलाई कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल देवकोटाले उक्त चेक हस्तान्तरण गरे । मृतक दुवैले गुराँस सार्वधिक जीवन बीमा गराएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
सामसुङको नयाँ मोबाइल बजारमा
सामसुङको नयाँ मोबाइल ‘सामसुङ च्याम्प डीयूओएस’ नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । यसलाई नेपालका लागि सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक विक्रेता इण्टरनेशनल मार्केटिङ प्रालिले भित्र्याएको हो । युवावर्ग लक्षित उक्त मोबाइलमा २ दशमलव ६ इञ्चको फूल टच स्क्रीन, १ दशमलव ३ मेगापिक्सल क्यामेरा, ब्लूटुथलगायत सुविधा रहेका छन् । सामाजिक सञ्जालसमेत सञ्चालन गर्न सकिने ‘सामसुङ च्याम्प डीयूओएस’मा एफएम रेडियो, एकैपटक दुई सिमकार्ड प्रयोग गर्न सकिनेलगायत सुविधा पनि रहेका छन् । बजारमा यसको मूल्य ७ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ पर्ने इण्टरनेशनल मार्केटिङ प्रालिले जानकारी दिएको छ ।
नोकियाको ‘ई-६ टच एण्ड टाइप’ मोबाइल
नोकियाको ‘ई-६ टच एण्ड टाइप’ मोबाइल नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । नेपालका लागि नोकियाको आधिकारिक विक्रेता नियोटेरिक नेपाल प्रालिले उक्त ‘टच एण्ड टाइप’ मोबाइल बजारमा आएको बताएको छ । २ दशमलव ४६ इञ्चको टच डिस्प्ले भएको उक्त सेटमा ८ मेगापिक्सल क्यामरा, विविध सामाजिक सञ्जाल, ब्लूटुथ, डिजिटल जुमलगायत सुविधा रहेका छन् । रू. ३४ हजार १ सय ८० रहेको उक्त मोबाइलमा भिडियो क्यामेरा, एफएम रेडियो, यूएसवी रेकर्डर लगायत विशेषता पनि छन् । नोकिया र्’इ-७१’ र र्’इ-७२’ को सफलतापछि बजारमाई-६ मोबाइल ल्याएको नियोटेरिकले बताएको छ ।
पब्लिक डेभलपमेण्टका अध्यक्ष प्रधान रहेनन्
पब्लिक डेभलपमेण्ट बैङ्कका अध्यक्ष युवराजसिंह प्रधानको बुधवार बिहान निधन भएको छ । गत माघ महीनादेखि विभिन्न रोगले ग्रस्त ८० वर्षीय प्रधानको थापाथलीस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो । उनका श्रीमती, एक छोरी र तीन छोरा छन् ।
स्व. प्रधानको जन्म विसं. १९८८ असोज ३ गते वीरगञ्जमा भएको थियो । अर्थशास्त्र र बैङ्किङ क्षेत्रमा रुचि राख्ने स्व. प्रधानले १९७० मा लण्डन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । उनी विसं. २०६६ फागुन १५ देखि पब्लिक डेभलपमेण्टको अध्यक्ष पदमा रहँदै आएका थिए । यसअघि उनले प्रथमपटक २०६३ मङ्सिरदेखि २०६४ चैत मसान्तसम्म सोही बैङ्को अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यस्तै, उनी त्रिचन्द्र क्याम्पसका अङ्ग्रेजी प्राध्यापक, त्रिविका शिक्षाध्यक्ष, मङ्गोलिया, चीन र उत्तर कोरियाका राजदूतसमेत भएका थिए । अङ्ग्रेजी व्याकरण र अर्थशास्त्रका गरी ४० भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएका स्व. प्रधानले वीरेन्द्र ऐर्श्वर्य पदक तथा गोरखा दक्षिण बाहु द्वितीय प्राप्त गरेका थिए । १ वर्षअघि अभियानसँगको कुराकानीमा उनले ३ देखि ५ वर्षभित्र पब्लिक डेभलपमेण्टलाई राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्क बनाउने लक्ष्य भएको बताएका थिए ।
हेटौडा र गोरखामा एभरेष्टका शाखा
एभरेष्ट बैङ्क लिमिटेडले हेटौंडा र गोरखामा गरी दुई नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । बुधवार आयोजित छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमबीच हेटौंडा शाखाको मकवानपुपरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश भट्टराई र गोरखा शाखाको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनप्रसाद वाग्लेले उद्घाटन गरे । त्यस्तै, सोही अवसरमा बैङ्कले गोरखामा एटीएम सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । यससँगै बैङ्कका शाखा तथा एटीएम ४३/४३ ओटा पुगेको छ । त्यस्तै बैङ्कले १९ ओटा एक्सटेन्सन काउण्टरमार्फत पनि बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आधुनिक तथा सरल बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउनेक्रममा बैङ्कले एभरेष्ट घरदैलो बैङ्किङ सेवा तथा मोबाइल बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल एभरेष्टले पञ्जाब नेशनल बैङ्क इण्डियासँग साझेदारी गर्दै आएको छ ।
आधारभूत सहकारी शिक्षा तालीम सम्पन्न
धर्मकर्म उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड पुरानो बानेश्वर र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित आधारभूत सहकारी शिक्षा तालीम आइतवार सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालित उक्त तालीममा उक्त संस्थाका ३० जना शेयरधनीको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यस्तै, धर्मकर्म उपभोक्ता सहकारीले उपभोक्ता सहकारी पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त पसलको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी सङ्घका सदस्य एवम् एडभर्टाइजीङ एण्ड मार्केटिङका प्रबन्ध निर्देशक निर्मलराज पौडेलले नेपालको आर्थिक अवस्था र सामाजिक विकासमा सहकारीको महत्त्वका बारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । हाल उक्त सहकारी संस्थामा १ सय ६२ जना शेयर सदस्य रहेका छन् । संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरूबाट शेयर पूँजी र बचत सङ्कलन गरी रू. ५० लाख ऋण लगानीसमेत गरेको संस्थाकी अध्यक्ष बिनू कोइरालाले जानकारी दिइन् ।
सनसाइन बचतको आम्दानी ६० लाख
गुलरियास्थित सनसाइन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले स्थापनाको १ वर्षमा करीब ६० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । मङ्गलवार सम्पन्न संस्थाको पहिलो प्रारम्भिक भेलामा उक्त कुराको जानकारी दिइएको हो ।
२०६७ साल असार १० गते स्थापना भएको सनसाइनमा हाल ७ सय ५४ खाता सञ्चालनमा रहेको छ । सहकारीको कुल आम्दानीमा ५९ लाख ९५ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको सनराइजका माधव भण्डारीले बताए, जसमध्ये शेयरबाट १० लाख १५ हजार २ सय, मुद्दती तथा बचतबाट ३९ लाख ८६ हजार ८ सय ९७ आम्दानी भएको हो । त्यस्तै, सदस्यता फारम दस्तुर, ब्याजलगायत अन्य स्रोतबाट ९ लाख ९३ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ आम्दानी भएको उनले बताए । उक्त अवसरमा अध्यक्ष भण्डारीले संस्थाले छोटो समयमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको दाबी गरे । उनले आगामी दिनमा संस्थाले स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए ।
विश्व बैङ्कको नेपाल निर्देशकमा गोल्डष्टेन
विश्व बैङ्कले नेपाल तथा बङ्गलादेशका लागि बैङ्कको निर्देशकमा श्रीमती एलेन गोल्डष्टेनलाई नियुक्त गरेको छ । सन् २००९ को नोभेम्बरदेखि बङ्गलादेशका निर्देशकमा कार्यरत गोल्डष्टेनलाई विश्व बैङकले नेपाल हेर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको हो । उनले नेपालका लागि कण्ट्री निर्देशकका रूपमा काम गर्न पाउँदा खुशी लागेको भन्दै नेपाल सरकार र जनतासँग मिलेर काम गर्ने बताइन् ।